Ciidanka ammaanka Boosaaso oo qabtay labo nin oo isku dayey afduub diyaarad ka kacday garoonka Boosaaso. – Radio Daljir
Ciidanka ammaanka Boosaaso oo qabtay labo nin oo isku dayey afduub diyaarad ka kacday garoonka Boosaaso.
Nofeembar 2, 2009 12:00 b 0
Boosaaso, Nov 02 – Ciidanka ammaanka Puntland ayaa gacanta ku dhigay labo nin oo ku tallaabsaday fal afduub diyaaradeed ah, taas oo ka dhacday garoonka diyaaraha ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Diyaaraddaan oo ahayd nooca rakaabka qaada oo ay la ahayd shirkadda Dallo Airlines ayaa waxaa afduubtay labada nin oo sida la sheegay ku hubaysanaa baskoolada kuwaasi diyaaradda afduubtay kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaraha ee magaalada Boosaaso ee Bandar Qasim Airport, isla markaana wadaha diyaaradda ku wargaliyeen in uu ka dajiyo garoonka degmada Lasqoray ee gobolka Sanaag sida laga soo xigtay qaar ka mid ah rakaabkii diyaaraddaasi saarnaa.
Diyaaradda ayaa dib ugu soo laabatay garoonka diyaaraha ee magaalada Boosaaso oo ay markii hore ka kacday, halkaasi oo ay isku gadaameen ciidanka ammaanka ee magaalada Boosaaso isla markaana ay ku qabteen labadii nin ee falkaan afduubka ah gaystay oo sida la xaqiijiyey midkood uu dhawac ahaa xilligii ciidanku gacanta ku dhigeen.
Nimankaan oo sida la sheegay ku hubasynaa baskoolado ayaa la dagaallamay ciidanka ammaanka, mana jiraan wax khasaaro ah oo soo gaaray diyaaradda iyo rakaabkii saarnaa toona, marka laga reebo mid ka mid ah labadii afduube oo dhaawac soo gaaray sida ay idaacadda Daljir u xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka ee magaalada Boosaaso.
Diyaaradda iyo rakaabkii saarnaa oo badqaba ayaa u kicitimay magaalada Jabbuuti ee caasumadda Jamhuuriyadda Jabbuuti oo ay markii hore ku sii jeeday.
Labadii nin ee gaystay falka afduubka diyaaradeed ah oo mid dhaawac yahay ayaa hadda lagu hayaa xarun bileyska Boosaaso ay leeyihiin halkaasi su?aalo lagu weydiinayo, waxaana sidoo kale la qabtay hal nin oo kale oo la sheegay in uu falka wax ka ogaa.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ay soo saareen saraakiisha amnigu, hase ahaatee waxay tilmaameen in ay wadaan baaritaan la xiriira ujeedda afduubka iyo wixii looga gol lahaa.
C/fitaax Cumar Geedi,
War saxaafadeed: Talo bixin dhacdooyinka nabadgelyo darro ee Puntland.